ပဒုမ္မာဆေးခဲ့သော အိမ်သာများ(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပဒုမ္မာဆေးခဲ့သော အိမ်သာများ(၁)
Posted by padonmar on Feb 20, 2012 in Creative Writing, Editor's Choice, Society & Lifestyle | 44 comments
ကိုဘလက်က အလုပ်ပေးထားတာ အိမ်သာတက်ရင်း သေသွားရတဲ့အကြောင်း ဖြေပေးဖို့။
ကျွန်မက အဲဒါလေး အကြွေးထားပြီး အိမ်သာ version တစ်ခုရေးချင်ပါတယ်။
တီချာနုက ကိုသစ်ရဲ့ post တစ်ခု မှာ မန့်တဲ့အထဲ
(ဒီစာရေးထားတာကြာတော့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးသွားပါတယ်)
ဆိုတာလေးရေးသွားတော့ မကြာခင်ကရောက်ခဲ့တဲ့ လေဆိပ်အိမ်သာလေးသတိရမိပါတယ်။
ကျွန်မတူမလေး ပြန်လာတာကို သွားကြိုရင်း
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာကို အကဲခပ်ချင်ရင်ဖြစ်စေ အိမ်သာကို သွားကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။
ရှေ့မှာဘယ်လို ပန်းအိုးတွေ အလှပြထားပါစေ
အိမ်သာ သန့်သန့်လေးမှမရှိတဲ့ နေရာကို အထင်မကြီးချင်ပါဘူး။
( ဒီလိုရေးပြလို့ ကျွန်မကို အိမ်လည်ခေါ်ဖို့တော့ မတွန့်ကြနဲ့နော်၊မကြည့်စေချင်ရင် မကြည့်ပါဘူး):D
အိမ်သာက ကျွန်မစိတ်ထင် ၆ ခန်းလောက်ရှိမယ်။
အမျိုးသမီးတွေကလည်း စောင့်နေကြတာ အပြည့်ပါပဲ။
လူတွေက အလယ်က ၂ခန်းလောက်မှာပဲ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ၀င်နေကြတယ်၊
အ၀က အိမ်သာနှစ်ခန်းက ပိတ်နေတာ တော်တော်နဲ့ လူထွက်မလာဘူး၊
ကျွန်မက အဲဒီ အခန်းရှေ့မှာ လူရှင်းတယ်ဆိုပြီး queue လုပ်နေတာ၊
၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ လူရှိတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး တံခါးခေါက်ကြည့်တယ်၊
၊ဒါနဲ့လူရှိကြောင်းပြတဲ့ ခလုပ်အ၀ိုင်းလေး အနီမှာပြနေတာကို
အသာလေးလှည့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းတွန်းကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာဘယ်သူမှ မရှိဘူး၊
အထဲတွန်းဝင်လိုက်တော့ အိမ်သာက squatting type
ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်ရှင်းပြီး ရေပန်းခလုပ်ကိုဆက်တိုက်နှိပ်ရင်း
ဒီအိမ်သာက လူထိုင်တဲ့နောက်မှာ sensor နဲ့ ရေ ဆွဲချတဲ့ပုံစံပါ။
တစ်ကြိမ်မှာ သူ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ရေထွက်ကျတော့
ဒီအတိုင်းနဲ့ ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေက ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး
၊ရေပန်းသုံးပြီးတော့သာ ဆေးရမှာပဲဆိုပြီး ဆေးကျောင်းသူ လုပ်ရပါတော့တယ်။
(ဒီနေရာမှာ စကားအတင်းစပ်ရရင်တော့ အခုဆိုရင် လေဆိပ်ဆိုတာ
ဟိုအရင်ကလို အထက်တန်းလွှာတွေသာ ကျင်လည်နိုင်တဲ့နေရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
၊ရွာက ဘဘတို့ ကြီးကြီးတို့ ဒွေးလေးတို့လည်း
တူ၊တူမ၊မြေး၊မြစ်တွေ ကြိုရင်းပို့ရင်း ၀င်ထွက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေပါပြီ
ဆိုတော့ အများဆိုင်နေရာတွေမှာ မြန်မာလိုအသုံးပြုနည်း
အညွှန်းစာလေးတွေလည်း ချိတ်ကပ်ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်)
။ဆေးရင်းဆေးရင်းနဲ့ အတွေးအာရုံထဲ အတိတ်က ကျွန်မဆေးခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်သာတွေ အကြောင်း ၀င်လာပါတယ်။
တကယ်ကိုတိုးတက်ဆဲနဲ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လည်းပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦးတိုင်းမှာ ရှိတဲ့အိမ်သာများဟာအမြဲသန့်ပြန့်နေလေ့
ရှိပါတယ် အိမ်တအိမ်ရဲ့သန့်ရှင်းမှုဟာအဲဒီရဲ့အိမ်သာကိုကြည့်တာနဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံကို လေ့လာခန့်မှန်းလို့
ရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမပဒုံမာသတိပေးသလိုပဲ သတိပေးစာကဒေါ့ကပ်သင့်ပါတယ်
ယောက်ကျားလေးအပေါ့သွားတနေရာမှာ အရှေ့ခြေတလှမ်းတိုးခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းမှုကိုကူညီပါ တဲ့ စာဖတ်မိတိုင်းလဲလိုက်နာမိတယ်
ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးပြီး ဆီးသွား ခိုင်းတဲ့ စာသား ရဲ့ရှေ့မှာ ၊
” သင်ထင်ထားတာထက် ပို တို ပါသဖြင့် ”
( It is shorter than you think )
ဆိုတဲ့ စာသားလေးလည်း ပါသေးတယ်လေ ။
အမှန် ပြောတာ အဲဒီ စာတမ်းမျိုးတွေ မြင်ဖူးတယ်။ ဘာကို ဆိုလိုမှန်း ကို မသိခဲ့တာ.. အီဒီယမ် တခုခု ဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
အစ်မ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လေးစားပြီးရင်းလေးစားရင်း ပါဘဲ။
စိတ်နှလုံး ဖြူစင်တာ ကိုလဲ အစ်မ ဓာတ်ပုံ ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မ သာဆို ဒီအတိုင်း ထားခဲ့မလားဘဲ။
အခုတော့ ရှေ့မှာ မော်ဒယ် လုပ်သူ ရှိခဲ့ပြီမို့ ကျွန်မ လဲ အမြင်မတော် ရင် ရှင်းပေးတတ်တဲ့ စိတ်ကောင်းမွေးကြည့် လိုက်ပါဦးမယ်။
နောက်လာမဲ့ အိမ်သာ တိုက်ပွဲ များကိုလဲ စောင့်စားနေပါတယ်။
တာဝန် ရှိသူများ တာဝန်ကို မကျေပြွန်မှု
ထုံးစံအတိုင်း Supply နဲ့ Demand မမျှ မှု
ပြည်သူများ ဗဟုသုတ နဲ မှု
…… တို့ နဲ့ ဘဲ လုံးခြာလည် ရင်း …… :-(
PS – အစ်မ ပုံကို မြင်ယောင်မိပြီး မရီရက်ရီရက် နဲ့ ရီမိသွားပါသေးတယ်။(ခွေးလွှတ်ပါ)
ဟီဟိ။ ဟုတ်ပါ့အရီးလတ်ရေ။ ကျွန်မဆိုရင်တော့မ၀င်တော့ပဲအပေါက်ကနေပြန် လှည့်မှာအသေချာပဲမို့ အန်တီပဒုံမာ့ပိုစ့်ဖတ်ပြီးရှက်မိပါကြောင်း။ နောင်ဆိုရင်တော့အန်တီပဒုံမာ လိုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။ လမ်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ဦးကြာရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဖရဲလေးစားသွားပါတယ်
အိမ်တစ်အိမ် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဘယ်လောက်သားနားသားနား အိမ်သာကြီးက စုတ်ပြတ်သတ်နေရင် အလွန်ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်ထွက်နေတဲ့ဆိုင်တွေဆို အိမ်သာတွေကို စပါယ်ရှယ်ဆောက်သင့်ပါကြောင်း။
ဦးကြာ အိမ်အလည်လာရင် ဖုန်းဆက်လိုက်နော့၊ အိမ်သာကြိုဆေးချိန်ရအောင်လို့
ဘယ်နေရာမျိုးမှာမဆို၊ဘယ်အိမ်မှာမဆို အိမ်သာတွေရဲ့ ညစ်ပတ်မှုတွေက စိတ်ပျက်စရာပါ။
ဒါတွေကို ကြည့်ရင် မသတီစရာပေါ့။ဒါပေမယ့် မမက ခုလိုမျိုး သန့် ရှင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့
အန်ကယ်လ်ဒုံ (၀ါ) ဦးကြာ
သများနဲ့ …မိတ်ချက်ပေးမယ်မလား ဟင်င်င်…
ကနွန်းကြီး လွယ်ထားတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် …ညီလေး ချောချောလေးဒွေနဲ့လေ…
အိမ်သာဆိုတာလူတကာရဲ့ဝန်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြာကြာတို့ဒီထက်ပိုရုပ်ရည်ကပိုလှမှာ
ပါ။ မြန်မာ့လေဆိပ်ကအိမ်သာပြင်ဖို့နဲ့ဆေးဖို့ဘယ်အချိန်ရပါ့မလဲ ကိုသန်းထွဋ်ကြီးရိုက်လာတဲ့ သံတွဲက Photoမှာဆိုရင် အဲယားဘတ်စ်ကြီး သံတွဲလေဆိပ်ကို ကတ္တီပါနဲ့လမ်းခင်းထားတယ်မှတ်ပြီး ၀မ်းလျားမှောက်ဆင်းလို့ ဂုဏ်ပြုပွဲလုပ်နေကြရတာကိုး။ ကြာကြာတို့လဲသတိတော့ထားဗျ ဒီခေတ်ကြီးမှာ
တော်ကြာ ဒေါ်ကြာကြီးဟိုးတစ်နေ့က ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းလုပ်သွားတာကျုပ်ဖြင့်အလုပ်ကိုပြုတ်ရော ဒီ့ထက်ပို
ရုပ်ဆိုးပါစေဆိုပြီး သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေကဆုတောင်းနေပါ့မယ်။ အန်တီကြာတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ အပြတ် လေးစားတယ်ဗျာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကအများသုံးတဲ့အိမ်သာတွေက ၀န်လျှော့ဖို့မဟုတ်ပဲ ၀န်ပိုလေး
အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်လဲခံစားရတယ်ဗျ တစ်ခါတစ်လေများ မအောင့်နိုင်လို့အများသုံးအိမ်သာ
သွားမိရင်သုံးလေးရက်တော့ ၀မ်းချုပ်သွားတယ်။ ညစ်ပတ်လွန်းတာပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အန်တီကြာ့ကိုအတုယူပြီးနောက်အမြင်မတော်ရင် ဆေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ ။ ဒါပေမယ့်တော်
ကြာ ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကိုစုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က အများသုံးသန့်စင်ခန်းမှသန့်ရှင်းရေးပါမန့်နန့်
ခန့်ရင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျတ်ကြီးသိပ်ထိခိုက်နေမှာစိုးလို့ တော်သေးပြီဗျ။
ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရရင်တော့ နိုင်ငံခြားသား တိုးရစ်များကြောင့် မြန်မာ့ အိမ်သာများ အဆင့် အနည်းငယ်တိုးတက် လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါဘဲ အန်တီရေ။
ကျွန်တော်လဲ ခရီးသွားရင် ဘယ်ဆိုင်က အိမ်သာ သန့်တယ် ဆိုပြီး မှတ်ထားပြီး အဲ့ဒီ့ဆိုင်မှာသာ စားလေ့ရှိပါတယ် ။ လက်ရာ ညံ့ရင်တောင် သည်းခံနိုင်ပေမဲ့ အိမ်သာ မသန့် ရင် အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ် ။
ဆေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ အလွန့် အလွန်ကို လေးစားပါတယ် ။ ကိုယ့်ဟာသာ ကိုယ်ပြောင်အောင် ပြန်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ သူများဟာ ဆေးလောက်အောင်တော့ မတွေး မလုပ်ခဲ့ဘူး ပါ ။
အရီးလတ်က နိုင်ငံခြားနေတာဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ့ ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းမှာပါ ..
တစ်ဘက် ကပြန်ကြည့်တော့လည်း ဘိုထိုင်ပေါ်မှာတောင် မထိုင်တတ်သေးတဲ့ (-င်ချ မထိုင်ဘဲ ဆောင့်ကြောင့် တက်ထိုင်ကြတဲ့ ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေ ။ ဘယ်ခလုပ် ကို နိုပ် (သို့) ဆွဲချ ပေးရမယ်ဆိုတာတောင် မသိနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေမှာ လုပ်ချင်ရင်တောင် မလုပ်တတ် ကြတာရယ် နဂို ညစ်ပါတ်တတ်တဲ့ အခံပါတာရယ် နဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ …..
All should do like you. Actually, people must clean my waste things myself.
If not, it violates the others human right.
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဂျီးဒေါ်ကြီးပြုခဲ့တဲ့အမှု့ကိစ္စကတော့ အလွန်လေးစားထိုက်ပါတယ်ဗျာ
လူတိုင်းလုပ်နိုင်ခဲပါတယ် ကျုပ်လည်း လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်
သဂျီးမင်းတြားကြီးရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်သော မည်သူနှင့်မျှမတူသော အတွေးများနှင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်
ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာရင် ဒီလိုနေရာဌာနတွေကိုအဆိုပါပြဿနာတွေဖြစ်လာရင် တာဝန်ရှိသူကို
ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်စေဘို့က လည်း အလွန်အရေးကြီးလှတယ်ဆိုရမှာပါဘဲ
ဂျီးဒေါ်ကြီးလို အကျိုးဆောင်တတ်သူတွေရှိတာကတော့ သပ်သပ်ပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်ပြောဘူးသလိုပါဘဲ အီးပါတဲ့နေရာတွေကိုလည်း အခကြေးငွေပေးတဲ့စနစ်
လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သန့်ရှင်းမှု့နဲ့ အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်
ချီးတစ်ခါပါ လေးငါးဆယ်တန်ပါတယ်ဗျာ သတ္တိရှိလို့ သူများရွာမှာ ချီးလာပါတာ ဟုတ်ဘူးလား
အလကားဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံပေးတယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ္မာ၍အသိဉဏ်ရှိသူတိုင်း
( အန်းနီးဝမ်း အဲဗရီးဝမ်း( မတ်စ်ထ်တူဒူး ) )
မိမိတို့၏ ချီးပါသေးပေါက်ကိစ္စများအပြီးမှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့
အလွန်းသေးငယ်သောကိစ္စဖြစ်သော်လည်း အလွန်ကြီးကျယ်သော ကိစ္စကြီးကို
ဖင်လှန်ပြီးတော့ဘဲချီးပါပါ မတ်တတ်ကြီးဘဲသေးပန်းပန်းပါ ကိုယ့်ကိစ္စကိုကိုယ်ရှင်းရမှာယနေ့လူ့မှု့ဝန်းကျင်ရဲ့
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလည်း သူ့ကိစ္စသူရှင်းရတာပါဘဲ ဒီအကြောင်းကို ပြဿနာဖြစ်စေတာက
အိမ်သာတစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့ အထူးသဖြင့် ရေနှင့် အခြားဘာညာကွိကွများမရှိတာက
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သက်ဆိုင်သူများ၏ တာဝန်လစ်ဟင်းမှု့သာဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို အရေးယူဆောင်ရွက်မှု့တစ်ခုပါ
နိဂုံးဆိုခြင်တာကတော့ အချို့များမှာ အထက်ပါ ပြည်သူ့နိတိ အလွန်ခေါင်းပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဒီကိစ္စတွေတွက် သူတို့ကိုဒေါသွားခွီးလည်းအပိုဘဲဖြစ်မှာမို့ အဲ့သည်သူတွေကို အသိတရားများရလာစေဘို့
တစ်ခုသော အီးပါတဲ့နေရာမှာ အောက်ပါစာတန်းလေးကိုရေးထိုးထားပြီး
ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ရှင်းတဲ့ နိုင်ငံကြီးသားတွေကို အသိမှတ်ပြုအပြန်အလှန်လေးစားပြတာလေးဟာလည်း
အကျိုးသက်ရောက်မှု့တစ်ခုလို့ ခပ်တည်တည်လေး ဖောလ်းလိုက်ရပါတော့တယ် ဂျီးဒေါ်ရယ်
ဒီအကြောင်းတွေကို ကျုပ်ရဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ဘကြီးနွားငှားကျောင်းရေးလက်ကမ်းစာစောင်များ
ကျီးကျီးကျယ်ကျယ် ခွင့်တော့ မတောင်းတော့ပါဘူး။
ပုပုက ချီးကျူးတာခံရတော့ ဘ၀င်တောင်မြင့်ချင်လာပြီ။
ကျွန်မ လူမမြင်ရတဲ့နေရာမှာ လုပ်ခဲ့တာ လူသိအောင် ကြွားတယ်လို့ မထင်ကြရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။
နောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် အများသုံး အခမဲ့ အိမ်သာတွေ စည်ပင်က များများဖွင့်ပေးနိုင်ရင်
လမ်းဘေးမှာ ကိုပေါက်ရိုက်ပြတဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးလုပ်တဲ့သူတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။
အခငွေပေးနေရရင် မပေးနိုင်တဲ့သူက လမ်းဘေးထိုင်သွားအုံးမှာပဲ။
စည်ပင်က ရတဲ့ အခွန်တွေကို လမ်းပြင်ဖို့၊အမှိုက် စနစ်တကျသိမ်းဖို့ နဲ့ အခမဲ့အိမ်သာတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
အကျင့်ကောင်းလေး တစ်ခုလို့ ခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး
လက်မလေးတစ်ချောင်း လေးလေးစားစား ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
အချိန်ရရင် အိမ်သာကြွေးလေးလည်း ဆပ်ပါဦး ခင်ဗျာ။
အများသုံး အိမ်သာမှာတော့ အဲလို မဆေး ဖူးသေးဘူး။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဒေါ်ကျည်းတန် လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးက ဆေးနေတာ တွေ့တဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ သူကို လေးစား အားကျမိတဲ့ စိတ်ဖြစ်မိတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ ဘရပ်နဲ့တော့ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့.. လူတွေ ခြေထောက်က ပါလာတဲ့ သဲ တွေ အပြင်မှာ ညစ်ပတ်သလို ဖြစ်နေတာတွေကိုတော့ ရေလောင်းပြီး တံမြက်စည်းလှဲဖူးတယ်။
အများဆုံး အိမ်သာတွေမှာ ကိုယ်အသုံးပြုပြီးရင်တော့ ရေလောင်းပေးခဲ့တယ်။
နောက်လူ အနံ အသက် မရှိစေအောင်လို့ပါ။
ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ ကောင်မလေးတွေ မရှိရင် ကိုယ်တိုင်ဆေးပါတယ်။ ညစ်ပတ်ရင် လုံးဝ သဘောမကျဘူး။ အနံ အသက် တွေ ထွက်နေတာကို လုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး။ ဘေးနံရံ ကျောက်ပြား တွေပါ သန့်မှ သဘောကျတာလည်းပါတယ်.. အိမ်မှာက အိမ်သာ နဲ့ ရေချိုးခန်း တွဲလျက်ဆိုတော့ ပိုပြီး သန့်အောင် ထားရပါတဲ့ သဘော ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကောင်မလေးတွေ ရှိတဲ့ အခါ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင် မဆေးပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက် ကျိုက်ထိးရိုးသွားတုန်းကတော့ တည်းတဲ့ အခန်းက ဘိုထိုင် ရေဆွဲက ပျက်သွားတော့ တယောက်ဝင်လိုက် ရေဆွဲ မရလို့ ပြန်ထွက်လာလိုက်လုပ်နေကြတာ.. ဆူး ၀င်တဲ့ အခါ တော်တော် နံ နေပြီ။ အနောက်က အဖုံးကြီး ဖွင့်ပြီး ရေဆွဲချ လိုက်တော့ ကျသွားတယ်။ နောက်တော့ တယောက် ၀င်လိုက် တခါ ရေဆွဲ ပေးလိုက်နဲ့ အဆင်မပြေတာနဲ့ အားလုံး ကို သင်ပေးထားလိုက်မှအဆင်ပြေသွားတယ်။
အများသုံး အိမ်သာမှာ ဆေးကျောင်းသူ လုပ်ခဲ့တဲ့ အန်တီ စိတ်ဓါတ် ကို လေးစားပါတယ်။
ဆူး ဆိုရင်တော့ ညစ်ပတ်နေရင် မ၀င်ပဲ သန့်တဲ့ အထဲကို ၀င်ဖို့ပဲ ကြိုးစားမှာပါ။
ဥပမာပေး ကောင်းလှချည်လား ဆူး…
ကျနော်ကတော့ အဲလိုမျုိုးတွေ့လို့ ရေလဲအဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူများအတွက်ပါပေါင်းလို့
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုကတော့ မဖြစ်မနေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်.
ဒါက ကြုံလို့မဟုတ်ဘဲ ပဒုမ္မာနဲ့ရောပြီး ကြွယ်လိုက်တာပါ။
ကိုလတ် ** ဖြစ်သွားပြီနော်။
ဆူး ကို ပြောတာလားလို့.. လန့်သွားတာပဲ.. အဟိ..
သမီးလည်း အဲ့ဒီ အကျင့်ရှိပါတယ် … ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်လျှင် … အိမ်သာကိုလေ့လာမိတာ .. အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ် … ။ အိမ်တွေမှာတော့ … မလေ့လာဖြစ်ဘူး … ။
အန်တီပဒုံမ္မာက လူလှသလို … နှလုံးလှပါတယ် … ။ ကိုယ်သာဆို … သူများ အညစ်ကြေးဆေးပေးဖို့ မပြောနဲ့ .. မြင်ရတာပြန်လှည့်ထွက်ပြီး …အန်မိမှာပါပဲ… ။ တစ်ချို့တွေ … အရမ်း လက်လွတ်စပယ်နိုင်တယ် … ။ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ် မရှင်းကြဘူး … ။ လေ့လာမိရသလောက် … အိမ်သာလေးတွေက … အမျိုးမျိုးပဲ … ။တစ်ချို့ကလည်း .. ညစ်ပေမှာ စိုးလို့ .. ရေပေးမသုံးချင်ကြဘူး ..
တစ်ချို့ အိမ်သာလေးတွေက ကြည့်လှပြီး … နေချင်စဖွယ်တောင်ကောင်းပါသေးတယ် … ။ အစာ မစားခင် .. အိမ်သာအရင်ဝင်လေ့လာတတ်တယ် … စားပြီးမှ လေ့လာလျှင် အန်ထွက်မှာ စိုးလို့
များတို့ ဆိုရင်တော့ ဝေါ့ ဆိုပြီး သန့် တဲ့ဟာ သွားလိုက်မှာပဲ
သူများညစ်ပတ်ထားတာတွေကို ရှင်းပေးခဲ့လို့ ရေလည်လေးစားတွားပြီ အူးကြာရေ
အညွှန်းစာလေးတွေလည်း ချိတ်ကပ်ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်”
ွှအဓိကကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်စိတ်ဓါတ်နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ တောရယ် ရွာရယ်မြို့ရယ်မဟုတ်ပါဘူး
အခုမှ သတိရတယ်.. အိမ်သာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မကျေနပ်ချက်ပေါ့.
အကို တယောက် ရှိတယ်.. သူ အိမ် ကို လာလို့ အိမ်သာ ထဲက ထွက်သွားရင် အနောက်က လိုက်ပြီး ရေပန်း နဲ့ လိုက် လောင်းရတယ်။ အသက်အရွယ်တွေက ပြောမကောင်း ဆို မကောင်း အိမ်မှာလည်း အိမ်ဖော် အပြည့်နဲ့ နေတာဆိုတော့ အသိတရား မရှိတော့ တော်တော် ခက်တယ်။ သေးပေါက်တာများ ကန်တော့ပါရဲ့နော်.. ပန်းခြံထဲမှာ မြက်ခင်းတွေ အကုန် ရေလောင်းတဲ့ ခေါင်းလည်နေတဲ့ ရေပန်းလိုများ ပေါက်သွားသလား အောက်မေ့ရတယ်။
သူ ၀င်သွားပြီဆို အိမ်သာ နံရံတွေက အစ ရေ လိုက်လောင်းရတယ်။ ချက်ချင်း လောင်းတာ မဟုတ်ရင် အနံက စွဲသွားလို့ တော်တော် နဲ့ မပျောက်ဘူး။ ဘယ်တုန်းထဲက အောင်းထားတာလဲ ကို မသိဘူး.. တော်တာ် ရှုပ်တဲ့ လူကြီး.. ပြောရင်း ဆိုရင်းနဲ့ ဖုန်းက ၀င်လာသေးတယ်။ သူ့ အကြောင်း ဖောက်သည်ချတာ အာရုံရနေလား မသိဘူး။ ဟိဟိ.. အတင်း စကားစပ်ပြီး မကျေနပ်ချက် လာ ထုတ်တာပါ။
ဒေါ်ဒေါ်ရေ တကယ်ကို လေးစားမိပါတယ် ။ ကျမစိတ်ကူးနဲ့တောင် မကြည့်ဖူးတာကို စိတ်သန့်သန့်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ။
ဒီလိုအများသုံးအိမ်သာသန့်ရှင်းရေးကတော့ တကယ်ကိုပဲ စည်းလေးကမ်းလေးနဲ့ ၀န်ထမ်းများ သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်သလို ဒေါ်ဒေါ်ပြောတဲ့ မြန်မာစာညွှန်းလေးတွေ ထားပေးတာလည်း အလွန်သင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူများပါထားတာတွေဆေးပေးတယ် အထည်းမှာပေနေရင် ဘေးနားမှာပါလိုက်ပေါ့ဗျ
ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းဝယ်စားတာ နောက်ဖေးပါတဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးတယ်
မသိရင် အိမ်သာထဲမှာ ထမင်းဝင်စားမှာကျနေတာဘဲ
ကျုပ်တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ထမင်းဆိုင်ဆိုတာ စားလို့ကောင်းလားမကောင်းလား ဒါဘဲတွေးတယ်
ကွယ် .. နံတတ်တဲ့ အမျိုးက နံမှာပဲ
မွှေးလွန်းရင်လဲ နံတတ်တာ မျိုးရှိမှာ ပဲ
နံတာကို သက်သာစေအောင် ဂရုစိုက်တာမျုိးလဲ ကောင်းတာပါပဲ
အန်တီပဒုံမ္မာရေ ….. တကယ်ပဲ လူကလည်းလှသလို စိတ်ထားကလည်း လှပါတယ် ..
နွယ်ပင်ဆိုရင် အိမ်သာ ညစ်ပတ်ရင် မတက်ပဲ လှည့်ထွက်သွားမိမှာပဲ ..
အခုတော့ အန်တီ့စာလေး ဖတ်ပြီး အသိတရားလေး ရသွားပါတယ် ..
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ် အစ်မရေ.
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆေးနေတာ ဒီစာဖတ်ပြီးမှ ပိုပီတိဖြစ်မိတယ်
ကျွန်မသာဆိုရင် လှည့်ထွက်သွားမိမှာပဲ …
နေ့တိုင်းအလုပ်ထဲမှာ တစ်နေကုန်နေရတဲ့ ကျွန်မအတွက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေက အိမ်သာသွားရတဲ့အချိန်များဖြစ်ပါတယ် … ရုံးမှာ အမျိုးသမီးဦးရေများပြီး တော်တော်လေးဟောင်းနေတဲ့ အိမ်သာ ၂ လုံးပဲ ရှိပါတယ် … သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းရှိပေမယ့် သန့်တယ်လို့လဲထင်ရပေမယ့် အနံ့အသက် မကောင်းဘူး … အန်တီ့လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလို့လဲ မရတဲ့အခြေအနေမို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲမသိဘူး … အနံ့က ညှီတီတီနဲ့ အန်ချင်စိတ်ပေါက်လွန်းလို့ …
အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု့ စီမံမှု့ယန္တယား ညံ့ဖျင်းပုံကို အကဲခတ်လို့ရပါတယ်။
အဲဒီသန့်ရှင်းရေးသမား တကယ်သန့်အောင် လုပ်မလုပ်ကို စောင့်ကြည့်ဘို့ တယောက်ကို တာဝန်ပေး
အိမ်သာသန့်ရှင်းသလား မသန့်ရှင်းဘူးလားဆိုတာကို ရှောင်တခင် အမြဲဝင်စစ်
အုပ်ချုပ်သူက ဘာတခုပဲလုပ်လုပ် တကယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်။ အဲဒါဆိုပြီးပြီ။
လူတွေကစည်းကမ်းမရှိလို့၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာညံ့ဖျင်းလို့၊ နိုင်ငံကြီးသားမပီသလို့ အမေရိကားမှာ စင်ကာပူမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ လျှောက်လက်ညှိုးထိုးနေလို့မရပါဘူး။
ပရိုင်းမိတ်ကနေ လူဖြစ်ဘို့ နှစ်နှစ်သန်းကြာတယ်။
လူဖြစ်တော့ အသားငါးကို မီးနဲ့ဖုတ်စားတတ်ဘို့ နှစ်နှစ်သောင်းကြာတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအခြေအနေသိရင် ပြင်ယူဘို့ စိတ်ရှည်ရမယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ ဖြေရှင်းစရာကိစ္စကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းရုံပါပဲ။
ဥပမာ ဂျပန်မှာ ဓါတ်လှေခါး မောင်းပေးတဲ့သူမလိုပေမယ့် ဒီမှာတော့(ဓါတ်လှေခါးခလုပ်မပျက်ချင်ရင်) ဓါတ်လှေခါးမောင်း ခန့်ထားဘို့လိုသလိုပေါ့။
ဦးပါမန့်တဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူမှာ လုပ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးသမားက အိမ်သာမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကဒ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတိုင်း သူ့အချိန်နဲ့သူ လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။
QC လုပ်တဲ့သူက လက်မှတ်ရော တကယ်သန့်မသန့်ပါ စစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ နေရာတိုင်းမှာ သန့်ရှင်းတဲ့ အိမ်သာတွေ အလွယ်တကူဝင်လို့ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပါပဲ။
ဒီသုံးလေးရက်ကို ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ကွန်မင့်ကိုပေးလို့မရတာ။ error တက်ပြီး ရပ်ရပ်သွားတယ်။ သူကြီးဆာဗာလား ကျုပ်ကွန်ပျူတာလား တခုခုပဲ။ အခုမှ အပေါ်ကကွန်မင့်လေးတက်သွားလို့ တော်တော်ဝမ်းသာတယ်။
တခါက အများသုံးအိမ်သာတခုမှာ (မ အိမ်သာခန်းမှာ)
အံမယ် … ပလပ်စတစ်တောင်လောင်းထားသေးတယ်။
“ -ါသယ်မဟုတ်ရင် ရေလောင်းခဲ့” တဲ့
အောက်မှာ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ လက်ရေးနဲ့ရေးသွားတယ်-
ကိုင်း … ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ..
အိမ်မှာတော့ အိမ်သာဆေးတာကို အဖေက သူကိုယ်တိုင် စံနမူနာပြ လုပ်ပြခဲ့လို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်သာဆေးရတယ်။
ဒါပေမယ့် အပြင်ရောက်ရင် တတ်နိုင်သလောက် အိမ်သာ မသွားဘူး။ စိတ်ညစ်လွန်းလို့။
ဆေးဖို့ဆိုတာတော့ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး။
ခုတော့ ဘိုလို လုပ်ရမလဲ?????
ရှေ့က လုပ်ပြတဲ့သူက လုပ်ပြသွားတော့
ပထမဆုံးပြောချင်တာ ကြယ်၂ပွင့်တွေ့ရတဲ့ မလတ်ကို CONGRATULATIONS!!!!! လုပ်ပါတယ်။
(ကြယ် ၂ပွင့် ဘာလို့ရလဲ ဘာဖြစ်မလဲတော့ မသိဘူး၊ဆရာသစ်တုံးကလည်း တွေ့တယ်၊ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထူးထူးခြားခြားရတာဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်)
နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက ကျွန်မရေးတာ နည်းနည်းလိုသွားပါတယ်။သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း အားနည်းလို့ ညစ်ပတ်နေတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။နောက်တကြိမ် လေဆိပ်ရောက်သွားတော့ လူကလည်း ရှင်းနေချိန် သန့်ရှင်းရေး အမျိုးသမီး ၃ ယောက် အဲဒီ အိမ်သာတွေ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
လူကြပ်ချိန် မသုံးစွဲတတ်သူများနဲ့ တွေ့သွားတာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
departure အတွင်းက အိမ်သာတွေဆို သန့်ပြန့်နေပါတယ်။ရှိရမယ့် facility တော်တော် များများဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
အခု ကျွန်မတွေ့တဲ့နေရာက arrival နဲ့ departure ကြားမှာ ၇ှိတော့ လူသုံးများသလို မသုံးတတ်တာ အဓိက ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော အိမ်သာများမသုံးဖူးသေးသော ပြည်သူတွေမှာ ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသိသေးတာကို ပြောချင်ပါတယ်။
သန့်တဲ့ အိမ်သာသုံးချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း သန့်အောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ဒီမိုကရေစီ နဲ့ တန်တဲ့ စည်းကမ်းရှိရပါမယ်။
နေ့စဉ် လေဆိပ်ကလေယာဉ်တွေ အ၀င်အထွက်နဲ့ ရှိတဲ့အိမ်သာတွေ crowded ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မလုံလောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ arrival ကစောင့်ရတာကြာတတ်လို့ အိမ်သာက ပို အသုံးများမယ်ထင်ပါတယ်။
ပဒုံမ္မာရေ ….. လေးစားထိုက်တဲ့ စိတ်ထားရှင်ပါဘဲ..
Ma Ei တော့ဆေးကျောင်းသူ လုပ်ဖို့ဝေး လို့ အပြင်ကိုပြေးထွက်မိမှာပါ..
နောက်လူသုံးရင် သန့်ရှင်းစေချင်တဲ့ စေတနာလေး လှပလိုက်တာ..
Swel Taw Ywet
ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလလယ်ပိုင်း ဂေဇက် ရေစီးကြောင်း၌ ကူးခတ်ကြည့်ခြင်း မှာ ရေးတာလေးကောင်းလို့ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံမှားပြီး sensor ကို censor ရေးမိလို့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။